ဗလလိုချင်လို့ စီလီကွန်တုံးတွေကို အထပ်လိုက်ထည့်ပြီး စော်ကြည်နေတဲ့သူ – ရှအေလငျး
ဗလလိုချင်လို့ စီလီကွန်တုံးတွေကို အထပ်လိုက်ထည့်ပြီး စော်ကြည်နေတဲ့သူ
အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ရုပ်သံကတော့ ဗလတွေအပြည့်နဲ့ အလန်းစားဘော်ဒီလိုချင်တဲ့အတွက် သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ခံပြီး ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ထားတဲ့ ဂျက်စတင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်….
အဆိုပါအမျိုးသားဟာ ဒီခွဲစိတ်မှုအတွက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ်မှုပေါင်း ၃၆ ခုအထိ ပြုလုပ်ရမယ်လို့သိရပါတယ်…
လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ကိုယ်စီရူးသွပ်မှုရှိကြတဲ့အတွက်…. သူ့အတွက်ကတော့ ဗလတောင့်တောင့်နဲ့ အလန်းစား ဘော်ဒီပိုင်ဆိုင်ချင်တာကတော့ သူ့ရဲ့ ရူးသွပ်မှုလို့ဆိုပါတယ်….
ဂျက်စတင်ဟာ အလှအပကြိုက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့အတွက် ဆံပင်ပုံစံအကြံပေးကအစ ငှားရမ်းထားသူတစ်ယောက်ပါ….
သူ့ရဲ့ခွဲစိတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကလည်း ထောက်ခံအားပေးထားပြီး…. လက်ရှိမှာတော့ အလန်းစားဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဂျက်စတင်းရဲ့ဘေးမှာ ကောင်မလေးတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပါတော့တယ်…..
Video Source : Үнэ цэнэтэй бай
အခုတဈခါတငျဆကျပေးမယျ့ ရုပျသံကတော့ ဗလတှအေပွညျ့နဲ့ အလနျးစားဘျောဒီလိုခငျြတဲ့အတှကျ သိနျးပေါငျးမြားစှာ အကုနျခံပွီး ခှဲစိတျမှုပွုလုပျထားတဲ့ ဂကျြစတငျဆိုတဲ့ အမြိုးသားတဈယောကျအကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ….
အဆိုပါအမြိုးသားဟာ ဒီခှဲစိတျမှုအတှကျ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ စီစဉျထားတာဖွဈပွီး ခှဲစိတျမှုပေါငျး ၃၆ ခုအထိ ပွုလုပျရမယျလို့သိရပါတယျ…
လူတဈယောကျခငျြးစီမှာ ကိုယျစီရူးသှပျမှုရှိကွတဲ့အတှကျ…. သူ့အတှကျကတော့ ဗလတောငျ့တောငျ့နဲ့ အလနျးစား ဘျောဒီပိုငျဆိုငျခငျြတာကတော့ သူ့ရဲ့ ရူးသှပျမှုလို့ဆိုပါတယျ….
ဂကျြစတငျဟာ အလှအပကွိုကျသူတဈယောကျဖွဈပွီး သူ့အတှကျ ဆံပငျပုံစံအကွံပေးကအစ ငှားရမျးထားသူတဈယောကျပါ….
သူ့ရဲ့ခှဲစိတျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးမိခငျဖွဈသူကလညျး ထောကျခံအားပေးထားပွီး…. လကျရှိမှာတော့ အလနျးစားဘျောဒီကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဂကျြစတငျးရဲ့ဘေးမှာ ကောငျမလေးတှေ ဝိုငျးဝိုငျးလညျနပေါတော့တယျ…..
ဇက်ကြောကိုက် ညောင်းညာတာတေရဲ့ ကုထုံးဆိုပြီး သံတွေတူတွေနဲ့ ရိုက်နေ
သဇင်ထူးမြင့် လေး တက်တူးထိုးခဲ့မယ်ဆိုရင် အဖေဖြစ်တဲ့ ဦးခင်လှိုင်က သဘောတူမှာလား ဆိုတာ
အဘွားအိမ်ပေါ်က မောင်းချလိုက်တုန်းက ရပ်ကွက်ထဲကပဲ ဟိုအိမ်ကခေါ်ကျွေး ဒီအိမ်ကခေါ်ကျွေး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်သူသူဇင်ရဲ့ ဘဝအကြောင်း
နောင်ချိုိဂုတ်တွင်း မှာ ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီး လုံးဝအခြေအနေ မကောင်းပါ ကားဆရာများ သတိရှိကြပါ
.သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘာဖလား ဘောလုံးပွဲ သွားကြည့်ဖို့ အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးကာမှ...